​जसले आफ्नै दूध बेचेर कमाइन् लाखौं::Hamrodamak.com
​जसले आफ्नै दूध बेचेर कमाइन् लाखौं
दुई बच्चाकी आमा लाम्प्रोउको दूध किन्न युवाहरु मरिमेट्छन् ।
काठमाडौं । सुन्दा र पढ्दा अनौठो पक्कै लाग्छ । तर, कुरा सत्य हो । साइप्रसकी एक महिला बच्चालाई स्तनपान गराउने आफ्नै दूध बेचेर लखपति बनेकी छिन् । राफाएला लाम्प्रोउ हो उनको नाम । दुई बच्चाकी आमा लाम्प्रोउको दूध किन्न युवाहरु मरिमेट्छन् । त्यसैले त उनी यो अनौठो व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी गर्न सफल भइन् ।
कसरी बिक्री भयो दूध ?
केही समयअघि उनले दोश्रो बच्चा जन्माएकी थिइन् । बच्चाले स्तनपान गर्दासमेत आफ्नो वक्षस्थलको दूध चुसेर नसकेपछि उनले आफ्नो दुध कसैलाई दान गर्ने सोँच बनाइन् । बच्चा भएका तर पर्याप्त दूध नआउने महिलाका लागि दान गर्न थालिन् । तर, उनको दूध दानबारे चर्चा भएपछि पुरुषहरुले समेत माग गर्न थाले । अनि उनले दूधकै व्यापार चलाइन् । आफ्नै दूध पुरुषहरुलाई बेचेर लाखौं कमाइन् ।
कस्ता पुरुषले किने दूध ?
शारीरिक सुगठन अर्थात् बडी बिल्डिंगका पारखी युवाहरु उनको दूधको ग्राहक बने । लाम्प्रोउकाअनुसार सुगठित शरीर बनाउन चाहने पुरुषका लागि बच्चाका आमाको दूध उत्तम हुन्छ ।
सुरुमा उनले दिनमा २ लिटर दूध बेच्ने गर्थिन् । प्रतिलिटर एक सय २५ रुपैयाँ बराबरको मूल्य पथ्र्यो । उनले ६ सय लिटरभन्दा बढी दूध बेचिसकेकी छिन् । यसबाट झण्डै ५ हजार पाउड अर्थात् करिब ७ लाख रुपैयाँ कमाएकी छिन् ।
उनले आफ्नो दूध बिक्रीको माध्यम अनलाइन् बनाइन् । उनलाई आफ्नो दुधको व्यापारको नशा नै लाग्यो र व्यापारलाई निरन्तरता दिइन् ।
उनले आफूलेजस्तै दुध बेच्न चाहने महिलाहरुको फेसबुक ग्रूपसमेत बनाएकी छिन् । आमाहरुको दुधको व्यवसायिक बिक्री नै सुरु गर्ने उनको योजना छ । एजेन्सी